Kure Kunze: Mumwe Munhu Wekutanga Akasarudzika Vhidhiyo Game yeLinux | Linux Vakapindwa muropa
Kure kure iri zita rinotitorera munhu wekutanga kutamba uye sainzi ngano yevhidhiyo mutambo neLinux rutsigiro. Kuti uwane rumwe ruzivo iwe unogona kushanyira iye zviri pamutemo webhusaiti kana peji re chiutsi. Ivo vanogadzira vaida kuchipa ramangwana rekubata uye nharaunda inoshanduka zvine simba kushamisika kwevatambi, pasina kukanganwa kubata kwemamisheni mune yakachena nzira yechikoro senge Space Kutsvaga, The Dig, FUll Throttle, nezvimwe saka kana iwe wakafarira mitambo iyi, iwe zvakare unofarira Kure Kunze.
Uchatamba iye ega anopona muTeam Selene, muongorori Zack Paterson uye uchafanirwa kuona kuti chii chakaitika kuchikepe, vashandi uye maitiro ekurarama mune zvekushanya izvo zvinokushamisa iwe. Mutambo uzere nekunyengera uye zvakavanzika izvo, zvichienzaniswa nedzimwe nyaya zhinji dzesainzi, zvinokupa rusununguko rwakawanda kana zvasvika pamutambo uchichinja magumo nguva yega yega painotambwa nekuda kwesimba iro ratatoona mune mamwe mazita akaongororwa. muLxA uye izvo zvinoita sekuzvifarira zvakanyanya kune vamwe vashandisi uye vaongorori munguva pfupi yapfuura
Maitiro ekuvandudza eiyo tsigiro yeGNU / Linux Inoshanda uye iwe unogona kutoona mhedzisiro pane Steam, asi ivo vanogadzira vanoita kunge vasina kuburitsa ruzivo rwakawanda nezvazvo. Kunyangwe Kure Kunze kuchikosha kwazvo, chinhu chinosuwisa ndechekuti ichine nzira refu yekufamba uye parizvino inozivikanwa kubva kune shoma ruzivo rwatinoona kuti ivo vanogadzira vari muchikamu umo makwikwi akakosha ari kuiswa kune purojekiti ine rutsigiro rweLinux, uye nekudaro gadzirisa mamwe matambudziko akakosha anogona kusangana nawo.
Saka kana iwe ukamirira vhiki shomanana kana nguva yakangwara, mutambo uchavandudza zvakanyanya. Vaya vakaedza vanoita kunge vakawana zvikanganiso zvikuru uye vanoti ichiri kuda kukwenya kwakawanda. Tichava vakangwarira kune matsva mafambiro ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Kure Kunze: Mumwe Munhu Wekutanga Akasarudzika Vhidhiyo Game yeLinux
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti hauna kumbozvitaura, sekunge zvaive zvisina kukosha uye zvakakosha kwazvo, kuti mutambo uyu uri muchiRungu chose.
Pindura kuna Josepo
Asi iwe unoda kutamba mitambo seBattlefield 1 paLinux uye ivo vanoburitsa iwo marara ekubhejera, ekutsvagisa pamusoro, kunyangwe iyo iron yaunofanirwa kupfura mumwe munhu zvirinani.
Pindura kune thechango